बाँकेका स्वास्थ्य संस्थामा सरुवाले भाँडभैलो ! — Paschimnews.com News From Nepal
बाँकेका स्वास्थ्य संस्थामा सरुवाले भाँडभैलो !
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/६/१७ गते
एकै पटक धेरैजना सरुवा भएर एउटै दरबन्दीमा आएपछि बाँकेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा समस्या देखिएको छ ।
सरुवा भएर जो पहिले पुग्छ, उसैले हाजिर गर्छ, ढिला पुग्ने स्वास्थ्यकर्मी हाजिर गर्न पाउँदैनन् । वनकटवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अनमी दरबन्दी रिक्त नहुँदै सरुवा भएर तीन जना आइपुगे, हाजिर गर्न पाएनन् ।
बाँकेकै रझेनामा एक जनाको दरबन्दीमा तीन जना आए, पहिले नै पुगेका देवेन्द्र केसीले हाजिरी गरे, पछि पुगेका गणेशबहादुर शाही र नन्दा गिरी हाजिरी हुन पाएनन् ।
एक जनाको दरबन्दी खाली रहेको पुरैनामा पनि तीन जना सरुवा भएर आएपछि सुरुमा आइपुगेकी लक्ष्मी थापा हाजिर भइन् ।
बसुदेवपुर, कचनापुर लगायतका धेरै स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि यस्तै भयो । सरुवा भएर जो पहिले पुग्यो, उ हाजिर भयो, ढिला गरी पुग्ने अन्तै लागे । सबै ठाउँमा जो पहिला आइपुगे, उसले हाजिर हुने मौका पायो ।
‘पायक’ पर्ने ठाउँ भन्दै भनसुन गरेर ‘मिलाएर’ आएका कर्मचारीहरुले हाजिर गर्न नपाएपछि स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा भाँडभैलो सुरु भएको छ ।
‘सरुवामा मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकबीच तालमेल नमिल्दा समस्या भयो,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, नेपालगन्जका अधिकृत रामबहादुर चन्दले भने, ‘भनसुनका र हचुवाका भरमा सरुवा गर्दा देशभर यस्तै समस्या देखिएको छ ।’
नेकपानिकट स्वास्थ्य कर्मचारी संगठनका नेतासमेत रहेका चन्दले सरुवामा ध्यान नदिँदा समस्या भएको बताए ।
यसरी सरुवा भएर आएकामध्ये पहिला पुग्नेले हाजिर हुन पायो । हाजिर हुन नपाएकालाई खाली भएका ठाउँमा हाजिर गराइयो, ती ठाउँ पनि सिधिएपछि अहिले हाजिर हुन नपाएकाहरु फिर्ता भइरहेको चन्दले बताए ।
एक हजार सात कर्मचारीहरु एकैपटक सरुवा गर्ने क्रममा ध्यान नदिँदा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारी हाजिर गर्न भन्दै जिल्लामा आइरहेको अधिकृत चन्दले बताए ।
पायक पर्ने ठाउँमा भन्दै सरुवा मिलाएर आएकाहरुले त्यो ठाउँमा अर्को पनि आएको छ भन्ने थाहा पाएपछि रातारात पुगेका कर्मचारीहरु पनि जिल्ल बनेर फर्किए ।
सरुवा भएको साथीलाई हाजिर गराउन रातारात मोटरसाइकलमा राखेर लगेको बताउँदै एक जना स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘कार्यालय खुलेको केहीबेरमा हामी पुगेका थियौ, हामी पुग्दा त अर्कैले दश मिनेटअघि नै अर्कोले हाजिरी गरिसक्नु भएछ ।’
कर्मचारीको सरुवा अस्तव्यस्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना अधिकृत महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कर्मचारी सरुवामा किन यस्तो समस्या देखियो भन्ने वास्तविकता बाहिर आउने सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
काठमाडौंमा बम विस्फोटपछि बाँकेको सुरक्षा व्यवस्था कडा, ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन
विकल्प आयुर्वेद नेपालगन्जमा खुल्दै
नेपालगन्जमा कटेजको आवरणमा यौन व्यवसाय, दुई जोडिसहित सञ्चालक पक्राउ
‘दाइजो नदिदा छोरीको हत्या गरियो’
कोहलपुरको साझा चोकमा सवारी दुर्घटनाः एकको मृत्यू, एक गम्भिर घाइते
रोकिएन ब्राईटल्याण्ड स्कुलको ज्यादती, दश बर्षे बालकलाई चर्को घाममा उभ्याएर यातना